Akụkọ NFT: 2021 bụ afọ nnukwu uto - Cazoo
Akụkọ NFT: 2021 bụ afọ nwere nnukwu uto
Mbido » Mbido » Akụkọ NFT: 2021 bụ afọ nwere nnukwu uto
NFT mkpesa nkeji nkeji iri na ise 2022
Tag: ethereum, lavalabs, Meebi, Nft
Oge ogugu: 2 minuti
Anyị agụọla akụkọ Nonfungible kacha ọhụrụ, raara nye ụwa NFT.
Anyi atukwasiri obi Nonfungible? Onye m bụ? Tọrọ ntọala na 2018 na mbụ iji soro azụmahịa azụmaahịa nke Decentraland, ụlọ ọrụ ahụ etolitela ma taa bụ otu n'ime isi ogidi nke gburugburu ebe obibi na-abụghị Funngible Token dị ka otu n'ime data kachasị ntụkwasị obi na ntụnye nyocha na ahịa NFT.
Ha na-esochi azụmahịa nke akụ na-enweghị isi na ozugbo na Ethereum blockchain ma na-enye ngwá ọrụ iji nyere ndị na-anụ ọkụ n'obi NFT aka, whale na ndị ọkachamara nyochaa mgbanwe nke ahịa NFT.
Akụkọ a bụ n'efu ma ị nwere ike budata ya na adreesị a. Data anaghị agha ụgha. Akụkọ ha Q2 na-enyocha usoro NonFungible Token na yinye Ethereum.
N'ime nkeji iri na ise nke ọgba aghara a, ụlọ ọrụ NFT nwetara nnukwu mmụba na ọrụ yana ndị ọrụ ọhụrụ na-abanye na obodo NFT na nke mbụ. N'ime ọnwa atọ gara aga, anyị ahụla ka mgbasa ozi isi tinye NFTs na pedestal, na-enye ụlọ ọrụ ahụ ihe ngosi magburu onwe ya, ma na-agbakwa ume nke ink, na-amụ ndị na-ese ihe na ọrụ ọhụrụ.
Anyị nwere ike ịsị na ọkụ okporo ụzọ niile bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
E jiri ya tụnyere afọ gara aga ma ọ bụ nkeji iri na ise gara aga, a na-ere ọtụtụ dollar, ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa mụbara, na ọnụ ọgụgụ nke obere akpa izu ụka na-arụsi ọrụ ike. Omume a bụ akụkụ nke uto siri ike maka ụlọ ọrụ NFT na cryptocurrency kemgbe Septemba 2020.
N'agbanyeghị ụda USD dị ala karịa na mmalite nke nkeji iri na ise, ọnụ ahịa ahịa ahụla mmụba siri ike. Akụkụ mkpokọta na-achịkwa ahịa nke ọma na nkeji iri na ise a. Mgbawa olu USD na Mee bụ n'ihi mmalite nke ọrụ Meebits nke larvalabs.
N'ime ngalaba niile, ngalaba akụrụngwa etolitela n'ime ọnwa atọ gara aga. Ebe ọ bụ na ndị a na-eji NFT eme ihe adịghị agbasa ebe niile, ha ji nlezianya tụlee na mgbaàmà a nwere ike ịghọ ihe na-emekarị.
NFT ndị a dị omimi ...
Isiokwu bu nke aỌnọdụ NFance Binance: Nchịkọta nke Andy Warhol, Salvador Dalì
Isiokwu ọzọNFT: Ntuzi zuru oke maka ịchọta 100x na-esote!
May nwekwara ike-amasị ya
India nwere ike ịkwaga iji kesaa Bitcoin dị ka klas akụ
Binance na Africa: Edere ịrị elu na ọnụọgụ nke ndị ọrụ Africa ọhụrụ
Elon Musk na SNL na-ekwu maka Dogecoin, na doge dara (Mee 8, 2021)